लघुकथा : अप्ठ्यारो प्रश्न - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कथा : नेपलीया
पुस्तक समीक्षा : विजयकुमारको ‘खुसी’: बडप्पनको बकपत्र →
छोरो मसिनेलाई स्कुल पुर्‍याइदिने जिम्मा सधैँ रत्नमानको हुन्थ्यो । हुन त ज्यामी काममा जान नपरेका बेलामा सुकुमाया पनि छोरोलाई समातेर स्कुल पुर्‍याउन कम्ती रमाउँदिनथिन् ।
मसिने उमेरमा भरखर आठ वर्षको थियो । न आफैँ झोला बोक्न सक्थ्यो, न भीडभाडमा बस चढ्न नै । रत्नमानले झोला च्याप्यो । छोराको हात समात्यो । ठेलमठेल गरेर बस चढ्यो । एकातिर टिफिनसहित कापीकितापको झोला, अर्कातिर छोराको हात । कहिले उत्तर–दक्षिण त कहिले पूर्व–पश्चिम हल्लाएर ऊ भीडासनमा जीउलाई व्यायाम गराउन थाल्यो । यस्ता व्यायाममा न रामदेव चाहिन्थ्यो न कामदेव ।
सधैँ चक्चक् गरिरहने मसिने आज निकै भावुक देखिन्थ्यो । रत्नमान छक्क पर्‍यो । ‘के भो
‘बा ‘त्यो’ स्कुल पढ्न जाँदैन ?’ यात्रु बोलाइरहने त्यही केटातिर देखाएर उसले प्रतिप्रश्न गर्‍यो ।
रत्नमान अकमक्क पर्‍यो । के भत्रे के नभत्रे दोधारमा पर्‍यो । यत्तिकैमा स्कुल आइपुगेकाले भरे कुरा गरौँला भनेर छोरालाई टार्‍यो ।
(कन्डक्टरलाई) सरकारले किन नपढाएको त ? भनेर मसिनेले सोधेर हैरान पार्छ । ‘सरकार छैन’ भनूँ ऊ आफैँ राज्यका तर्पmबाट कारवाहीमा पर्न सक्छ । के भत्रे के नभत्रे ! ऊ रनभुल्लमा पर्‍यो । न त अरु कसैले उसलाई यस विषयमा बताउन नै सके ।
अझै पनि, मसिनेको बालहठ यथावत् थियो । तर रत्नमान साँचो कुरा बताउन अझै सकिरहेको थिएन । बरु रातो मुख लगाएर छोराका अगाडि त्यसै टोलाइरह्यो ।
विधा : लघुकथा | Basudev Guragain, Pindaalu Pandit. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।